अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली भन्छन्ः हामी जोखिममा छौं, छिटो उद्धार होस् – Nepal Online Khabar
साउन ३२, २०७८ सोमबार 1688
काठमाडौं : कास्कीको रुपा गाउँपालिका–१ दरगाउँटारका वीरेन्द्र गोदार अफगानिस्तानको काबुलस्थित क्यानेडियन दुतावासमा काम गर्थे । सुरक्षाकर्मीको रुपमा विगत ११ वर्षदेखि दुतावासमा काम गर्दै आएका उनी अहिले भने निकै नै अप्ठेरोमा छन् ।
ता’लिबान वि’द्रोहीले अफगानिस्तानको राजधानी काबुललाई क’ब्जामा लिएसँगै त्यहाँ कार्यरत गो’दार जस्ता धेरै नेपाली कामदार अप्ठेरोमा परेका छन् । जतिसक्दो छिटो नेपाल सरकारको उ’द्धारको पखाईमा रहेको उनीहरुको भनाई छ । ता’लिबानको क’ब्जा भएसँगै गोदार कार्यरत दुतावासका उच्च पदाधिकारी स्वदेश फर्किसकेका छन् भने उनीहरुलाई होटलमा राखिएको छ ।
दुतावासको सु’रक्षाको जिम्मा लिएको कम्पनि हार्टले नेपाली सु’रक्षाकर्मीलाई का’बुलको होटलमा राखेको छ । गोदारका अनुसार सु’रक्षा कम्पनिले नेपाल पठाउने भनेर हिजै काबुल विमानस्थल नजिकैको होटलमा राखेको थियो । होटल जोहाक भिलेजमा उनीहरु अहिले बसिरहेका छन् ।
‘हामी विमानस्थल नजिकैको होटलमा बसेका छौं । बाहिर गो’लाबारी चलिरहेको छ । निकै नै जो’खिममा छौ । जतिसक्दो छिटो उ’द्धार गरिदिए हुन्थ्यो,’ गोदारले भने, ‘नेपाली, भारतीय सहितका विभिन्न मुलुकका ना’गरिक अलपत्र छौ ।’ उनका अनुसार क्यानेडियन दुतावासमा काम गर्ने करिब एकसय जना र जर्मन दुतावासमा काम गर्ने अरु नेपाली कामदार पनि त्यही होटलमा छन् ।
नेपाली र भारतीय गरि करिब २ सय जना कामदार जोहाक भिलेजमा रहेको उनले बताए । नवलपुरको वर्दघा’टका याशबहादुर बराल मगर पनि का’बुलकै जोहाक भिलेज होटलमा छन् । उनी पनि विगत ११ वर्षदेखि क्यो’डियन दुतावासमा काम गर्दै आएका थिए ।
‘होटलमा बस्न र खानको स’मस्या त छैन, तर, सुरक्षा जोखिम छ । कतिखेर यो मूलूक छा’डौ भन्ने भएको छ,’ मगरले भने, ‘कुनैपनि बेला यहाँ जे पनि हुनसक्छ । हामी जो’खिममा छौ । सरकारसँगै श्रम स्वीकृत लिएर हामी यहाँ काम गर्न आएका हौ ।’
सरकारले यहाँ रहेका नेपालीलाई तुरुन्तै फिर्ता पठाउने पहल गरोस भन्ने आफहुरुको चाहना रहेको उनले सुनाए ।‘क्यानडा सरकारलाई ११ वर्षदेखि सेवा ग¥यौ । तर, अप्ठेरोे परेको बेला हामीलाई बीचैमा छाडेर फिर्ता गयो,’ उनले भने, ‘दुतावासका मान्छे सबै गए ।
हामीलाई यहाँ काममा लगाउने सुरक्षा कम्पनि मात्र हाम्रो सम्पर्कमा छ ।’ उनका अनुसार जोहाक भिलेज होटल का’बुल विमानस्थलदेखि करिब ३ किलोमिटर टाढा छ । विमानस्थल क्षेत्रमा गो’ली च’लिरहेको उनीहरुले सुनाए । यसअघि पनि नेपाल आउजाउ गरिरहेको भएपनि अहिलेजत्तिको अप्ठेरो आफुहरुलाई कहिल्यै आइनपरेको उनले सुनाए ।
भारतको देहरादून घर भएका दीपक गुरुङ पनि जो’हाक भि’लेजमै छन । उनी विगत १२ वर्षदेखि क्यानेडियन दुतावासमा सु’रक्षाकर्मीको रुपमा कार्यरत थिए । ‘कसरी र कहाँ जाने भन्ने नै नि’श्चित छैन । हामी निकै नै अ’प्ठेरो अवस्थामा छौ,’ उनले भने । गुरुङका अनुसार ता’लिबानले राजधानी का’बुल नियन्त्रणमा लिएपछि अवस्था अ’त्यासलाग्दो बनेको छ ।
बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन । कतिखेर कहाँ के हुने हो भन्न त्रास छ । गुरुङका अनुसार सोमबार बिहान ५ बजे नै क्यानडाबाट जहाज आउने र उ’द्धार गर्ने भनेर उनीहरुलाई विमानस्थल नजिकैको होटलमा राखिएको थियो । तर, तालिबानका कारण विमानस्थल नै ब’न्द भएपनि उडान नै अ’वरुद्ध भएको छ ।
क्यानेडियन जहाजले उनीहरुलाई स्ता’नबुल पु¥याउने र त्यहाँबाट नेपालीलाई काठमाडौं र भारतीयलाई दिल्ली पठाउने तयारी भएको थियो । तर, विमानस्थल नै बन्द भएपनि आफुहरुको उ’द्धारको लागि आउने भनेको जहाज नै आउन नसकेको उनले बताए ।
विमानस्थल क्षेत्र खुला बसपार्क झै भएपछि अहिले अमेरिकी सु’रक्षाकर्मीले विमानस्थल नियन्त्रणमा लिएको छ । सु’रक्षाकर्मी र उद्धारका उडान मात्र हुने भनिएपनि कुनैपनि उडान हुन नसकेको उनीहरुको भनाई छ । ‘अब के हुने हो भन्न सकिन्न । तर, हामीलाई उद्धार हुनुपर्छ भन्ने हो ।
बेलैमा उद्धार नहुने हो भने जे पनि हुनसक्छ । हामी यहाँ निकै नै तनावमा छौ,’ उनले भने, ‘हामी अफगानिस्तामा अलपत्र छौ । घरमा रहेका परिवारका सदस्य पनि त’नावमा छन् । हाम्रो बारेमा परिवार नै चि’न्तित छन् ।’ अफगानिस्तामा रोकिएका उनीहरुका अनुसार त्यहाँ केही संख्यामा नेपाली नागरिक छन् ।
तर, उनीहरु कति संख्यामाा छन् भन्ने उनीहरुलाई यकिन छैन । त्यहाँ पुगेका अधिकांश नेपाली विभिन्न दुतावासमा सुरक्षागा’र्डको रुपमा कार्यरत छन् । अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छाडेपछि ता’लिबानले एकपछि अर्काे सहर क’ब्जा गरिरहेका थिए ।त्यही क्रममा आइतबार मात्र ता’लिबान बिद्रो’ही राजधानी काबुल छिरेपछि त्यहाँको अवस्था त्रा’सदिपूर्ण बनेको उनीहरुको भनाई छ ।
Prevपरराष्ट्रले उपलब्ध गराएको सेवामा अफगानिस्तानबाट १३४ नेपाली सम्पर्कमा आए ।
Nextआज भदौ १ गते पहिलो मंगलबार , कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नु-होस् राशिफल !
अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली भन्छन्ः हामी जोखिममा छौं, छिटो उद्धार होस् (1688)